Nbili nke SMB na-aga n'ihu | Martech Zone
Tọzdee, Nọvemba 8, 2012 Douglas Karr
Akụkụ nke ịmata ohere maka ahịa bụ ịghọta etu ndị ahịa gị si eji ngwaahịa na ọrụ gị. Ndị ọrụ anyị na-agbanwe n'ụzọ dị egwu na ngalaba azụmaahịa obere na ọkara (SMB). Ọ bụrụ na azụmahịa gị na-eje ozi SMB, ị ga-ahụrịrị na ọrụ dịpụrụ adịpụ na ihe eji emekota ihe dị iji leverage ngwaahịa na ọrụ gị.
Ọ bụrụ na ị B2C, ghọta na oge ọrụ na-agbanwe yana ịzụ azụmaahịa na-agbanwe. Mgbe ụlọ ahịa na-ere ahịa na-enyere ndị ahịa aka n'ehihie na ngwụsị izu, ecommerce na-ejikwa oge ndị ọzọ niile. Y’oburu n’achoghi uru ngbanwe a n’ime agwa gi, you're na-efu efu.
N'ime afọ ndị na-adịbeghị anya, anyị ahụla nkwalite na otu ọhụụ nke SMB - "Ọganihu SMB na-aga n'ihu," ndị otu na-emebi oke nke oke ndị asọmpi ha. Ma gịnị na-eme ka SMB na-aga n'ihu? Site Cisco si infographic, Nbili nke SMB na-aga n'ihu.
Tags: mmekotadị ọkara ahịaobere azụmahịaSMBTechnologyarụ ọrụ ego
Nov 8, 2012 na 12:59 PM
Ekwenyere m na nkwupụta gị, mana agaghị m ejedebe nyocha ahụ na B2C, B2B chere ihu otu ọnọdụ ahụ.
Nov 8, 2012 na 1:16 PM
Ihe omuma mara mma na ihe omuma di omimi banyere ngbanwe nke teknụzụ na mmekota. M ga-ewere onwe m akụkụ nke ndị ọrụ mmekọrịta mmadụ na ibe m, valueskpụrụ ọrụ m dị ugbu a na omume na-aga n'ihu SMB ụzọ, isi ihe na-ere mgbe m kpebiri isonyere otu ha. Echere m na ọ bụ ihe na-atọ ụtọ ka ndị ọrụ ọhụụ si ebi na ịntanetị na ndụ n'ezie n'otu oge, na-egosi na anyị chọrọ otu ụdị mgbanwe, njikọ aka na agagharị na gburugburu ọrụ ha.
Nov 9, 2012 na 5:08 AM
Nnukwu ihe omuma! Ghọta ọtụtụ ihe banyere SMB na-aga n'ihu ..
Nov 9, 2012 na 5:28 AM
Ọzọ dị ukwuu post site na ihe atụ. Daalụ infographic na gị Douglas. Ọ dị ịtụnanya mgbe ị ga-etinye ya n'ihe atụ ihe ịchọrọ ikwupụta na isiokwu gị. Ma kwere m, ọ dị irè karịa itinye ya niile n'ọtụtụ paragraf ma gụọ ya.